၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 11/30/08 - 12/7/08
Taw Htal Ka Poem
["[ဥာဏ်]"] life is beauty ) ဆိုတဲ့mail ၀င်လာရင် Delete လုပ်လိုက်ပါ။
လုံးဝ(လုံးဝ)မဖွင့်ကြည့်ပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ password ခိုးသွားလိမ့်မယ်။
If u get ( "nyan " hello "life is beauty" ) mail , don't open it!
It's better to delete that mail ..
Because ur mail password may be hacked/ stolen.
မှတ်ချက် ။ ။ http://nyeinsuu.blogspot.com မှ လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပါသည်။
ကလစ်လုပ်ပြီး ကြည့်ပါ ။
မှတ်ချက် ။ ။ http://zarganar-windoor.blogspot.com မှ ကူးယူမျှဝေပါ၏ ။
Posted by နော်မန် at 11:22 AM
မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ၊ ဓာတ်ပုံ - နာရီ